အိုဘယ့် ဘလော့ဂ် | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
Yahhhhhhhhh..။ ဒီတခါတော့ ကျနော် အရင်ဆုံးပဲကွ။ လက်စသတ်တော့ အမ စာတင်နေတဲ့အချိန်က ကျနော်အိပ်ပျော်နေချိန်တွေ ဖြစ်နေတာကိုး...။ ဘလော့ရောဂါဆိုတာကတော့ အမြစ်တွယ်မိရင် အဲလိုပဲ အမရေ...။ ဒါပေမယ့် အမလို ဘလော့ဂါတွေ ရောဂါပိုးရင့်လေလေ ကောင်းလေလေပဲ။ နာတာရှည် ဖြစ်ရင် ပိုတောင်ကောင်းသေး။ :D
အမရေ ညဘက်ဆိုအိပ်လို့တောင်မပျော်ဘူး စာဖတ်လိုက် စာရေးလိုက် မိုးလင်းရင် ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက် ဘယ်သူတွေက ကော့မန့်တွေပေးသွားလဲ နဲ့ နေမြင့်လေ အရူးရင့်လေပါပဲ။
အာ- အပေါ်က..အားပေးထားတဲ့သူ တွေ ကလည်း..ပုံကြည့်ရတာ- အတော် ရောဂါသည်း တဲ့လူ တွေ ပဲထင်တယ်။
မချိုသင်းရေ- ကိုယ်တယောက် တည်း မဟုတ်ဘူး။ ရူးသာ ရူး..ရင့်သာရင့်.. ရေးသာရေး။
i m not able to write...so i can only visit ur blog...Carry on!! Go ahead!!
Join the club အမရေ။ Same here!!! :))
အဆင်ပြေပါစေ. ဘာဖြစ်လို.ဆေးထိုးရတာလဲ ဆီးချိူရှိလို.လား။
ဘလော့ဂ် နဲ့ ဝေးနေရတဲ့နေ့ တွေဆို ငူတူတူ ဟာတာတာ ရီဝေေ၀ မှုန်ဝါးဝါးနဲ့အတော်ဆိုးတာပဲ မ ရေ…
ဟင်…ဘလော့ဂ်…ဘလော့ဂ်…. တလော့ဂ်တည်း လော့ဂ်လော့ဂ်နေရတယ်…..¶
ကျွန်တော်တို့ အညာ မှာ မှန်ရောင်ဟင်းချို ဆိုတာ တကယ်ရှိပါတယ်။ မှန်ဟင်းချိုတော့မဟုတ်ပါ ခင်ဗျား၊အလှူမှာကျွေးလေ့ရှိပါတယ် ၊ငခြောက်ချက်၊ပဲတီချဉ်သုပ်၊ ငရုပ်ထောင်းကြော်၊မှန်ရောင်ဟင်းချို ၊စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ ။
အဲဒီ ဘလော့ရောဂါက အတော်ဆိုးတယ်။ ဘလော့ပိုးထိုးတယ်ခေါ်တယ်။ တော်ကြာ ဘလော့နာကျဦးမယ်နော်။
ဂျမ်းတို့ ဘလော့စရေးတုန်းကလည်း အဲလိုပဲ အမရေ။ အမက စာရေးကောင်းတော့ ဘလော့ရောဂါစွဲနေပြီဆိုလည်း အမရေးတာ ဖတ်ချင်နေတဲ့ လူတွေအတွက် ကောင်းတာပေါ့နော။း)